Recipe Saxan Cunto Bear (+ Video) - Sugar Geek Show - Nacnac
Recipe Calool xanuun
Sida loo sameeyo rooti jilicsan oo dhab ah oo shelf-deggan
Cunnadan macmacaanka ah ee cirridku waxay ku habboon tahay u habeynta dhadhankaaga iyo midabadaada. Waxaan sidoo kale ku isticmaalaa qashinkan quraacda barashada sariirta ukunta u ekaanta dhabta ah ee gummies-ka ah! Waxaa jira waxyaabo badan oo aad ku sameyn karto cuntadan macaan ee dhabta ah.
Cuntadani waxay la mid tahay tan karinta macmacaanka guryaha lagu sameeyo laakiin leh walxo gaar ah oo lagu daray walxaha duugga ah ee gummy classic.
Qaybta ugu fiican ayaa ah, kuwani uma baahna in la qaboojiyo. Sida oomaatada cirridka dhabta ah, waxaad ku ridi kartaa kiishka oo waad cuni kartaa wakhti kasta.
george clooney wuxuu hadiyado siiyaa saaxiibbo 1 milyan
Cuntadan waxaa ku jira waxyaabo gaar ah oo laga yaabo inaad ubaahantahay inaad iibsato kahor waqtiga inkasta oo hubi inaad hubiso liiska dukaamaysiga kahor intaadan bilaabin.
Waa kuwee maaddooyinka aad u baahan tahay si aad u sameyso cunto karinta dhabta ah ee ciridka?
Kahor intaadan bilaabin, isku keen maaddooyinkaaga. Waxaad ubaahantahay inaad ubaahantahay inaad dalbato qaar kamid ah qadka tooska ah laakiin rarida waa mid deg deg badan oo fudud!
Sonkorta dahaaran - Macaaneeyaha ugu weyn ee cuntadan oo aad u maleyneyso inaad horey u haysatay
Biyaha ama dareeraha dhadhanka leh sida casiirka - Waxaan jecelahay inaan isticmaalo biyaha ka dibna aan u isticmaalo dhadhanka nacnacda iyo midabaynta cunnadayda cirridkayga laakiin waxaad isticmaali kartaa miraha miraha oo waxaad uga tagi kartaa sonkorta granulated si aad u hesho ikhtiyaar caafimaad.
Gulukooska - Waxay siisaa digaagga xanjada ah ee muuqaalka calalinta oo ka dhigaysa mid wanaagsan oo jilicsan. waxaad sidoo kale ku badali kartaa gulukooska sharoobada galleyda, sharoobada dahabka ah ama malab si aad u hesho ikhtiyaar dabiici ah.
Sorbitol - Maadada sixirka ee sida saxda ah u xambaarsan orso ciridka Waad ka tagi kartaa tan haddii aadan gabi ahaanba rabin inaad dalbato laakiin cirridkaaga cirridka ah ayaa noqon doona mid jilicsan oo jilicsan.
Gelatin - Waxay ka caawisaa dejinta ciridka xanjo waxayna siisaa calaliin fiican. Waxaad ku beddeli kartaa gelatin agar agar haddii aad jeclaan lahayd ikhtiyaar ikhtiyaari ah laakiin hubi inaad raacdo talooyinka beddelka ee sanduuqa.
Citric Acid - Tani runti runtii way fududahay in laga helo dukaamada cuntada ee leh weel qasacadaysan. Citric acid waa dhadhanka dhanaan ee laga helo miraha liinta waxayna siisaa orso xanjo ah dhadhanka dhadhanka ah.
Nacnac udgoon - Waxaan isticmaalayaa saliidaha Lorran dhadhanka nacnaca oo laga heli karo dukaamada iibiya nacnaca samaynta alaabada sida Michaels ama Joanns. Haddii aad isticmaaleyso casiir waad ka tagi kartaa qaybtaan banaanka.
Qalab noocee ah ayaad ubaahantahay qashin-qabadkan ciridka ah?
Way adagtahay in la sameeyo beenta ciridka oo aan lahayn a caaryada ciridka xanjo ! Midkan waxaan ka helay Amazon oo waxay la timid seddex daadshe sidoo kale. Heshiis weyn!
Sidoo kale waa fikrad fiican inaad yeelato miisaan lagu cabbirayo maaddooyinkaaga. Isticmaalka koobku sax maahan sidaa darteed natiijooyinkaaga waxaa laga yaabaa inaysan isku mid noqon haddii aad isku daydo inaad beddesho. Akhriso qoraalkeyga sida loogu isticmaalo miisaanka jikada wax lagu dubo .
Qalabka kale ee aad u baahan doontaa waa digsi dhexdhexaad ah iyo midabaynta cuntada qaar haddii aad rabto inaad midab yeelatid digaaggaaga cirridka ah.
Sideed u sameysaa cunto karinta dhabta ah ee ciridka?
Sameynta cuntada sida loo kariyo ciridka ciridka waa mid fudud. Gelatin-kaaga ku shub biyahaaga ama casiirkaaga kuna walaaq isku dar. Gelatin ha u nuugo dareeraha 5 daqiiqo.
Isku dar sonkortaada, sharoobada galleyda iyo sorbitol ee digsigaaga kuna kari isku kari. Ka dibna ku dar isku darka gelatinkaaga oo walaaq ilaa ay wada dhalaalayaan. Dheriga dabka ka saar oo ku walaaq aashitohaaga. U ogolow isku-darkaagu inuu fadhiisto 5-10 daqiiqo si ay xumbadu kor ugu kacdo dusha sare.
Ka qaad xumbadaada. Haddii aadan xaaqin xumbada, mar dambe ma tagi doonto. Kaliya waxaan isticmaalaa qaaddo.
U qaybi iskudarkaaga ciridka ciridka ah saddex maddiibadood. Waxaan ku shubay shaandhada si aan uga saaro wixii kuuskuus ah oo sonkor ah ama gelatin ah oo laga tagay.
Marka xigta, ku dar dhadhanka nacnacaaga. Waxaan doortay raspberry, strawberry iyo feed tropical. Dhalooyinkaygu waxay la yimaadeen dhibic sidaa darteed waxaan u isticmaalay qiyaastii laba dhuumaaleysi buuxa oo ah baaquli kasta. Waxaan qiyaasayaa qiyaastii 1/2 qaado yar oo dhadhan ah.
Kadib waxaan ku daray dhibic midabaynta cuntada. Pink for ah. strawberry, buluug beedka loo yaqaan 'raspberry' iyo jaalle ah feedhka kulaylaha.
Sameynta orso ciridka
Waxaan ku buufiyay caaryadeyda qaar ka mid ah saliida canabka ah marka hore si ay cirridyadu u soo baxaan si fiican oo dhalaalaya waxayna ka hortageysaa dhejinta. Buufiyo wasakhda ka dibna u rog dhinaca qaar ka mid ah tuwaallo waraaqo ah si aad saliidda xad-dhaafka ah uga daadiso.
Waxa kaliya ee haray ayaa ah in la isticmaalo qalabka wax lagu shubo si loo buuxiyo caaryaheena. Waa inaad haysataa isku-darka cirridka cirridka oo kugu filan si aad u buuxiso dhammaan saddexda qaab-dhismeedkaaga illaa iyo xagga sare.
Qaababkaaga ku rid qaboojiyaha 6-24 saacadood ka hor intaadan kala bixin!
maxaad 'u xiran karin dhammaan kuwa cirka madow
Ma ku samayn kartaa bearshan cirridka leh khamri?
Waad ka dhigi kartaa bahashaan xanjada ciridka ah ee cirridka weyn adigoo biyaha ku beddelaya khamri ama vodka! Waxay ka dhigtaa hadiyad weyn ama daaweyn xaflad!
Waxa kale oo laga yaabaa inaad jeceshahay cuntooyinkan xanjada ah
Recipe Beer Cirridka
Recipe Jell-O Guriga Lagu Sameeyay
Cuntadani xanjada ciridka ah waxay ka dhigeysaa orso gummy shelf-deggan oo u dhadhamiya sida dhabta ah! Beddel dhadhanka iyo midabada oo ka dhig mid gaar ah Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:5 daqiiqado qaboojinta:6 saacado Kalori:60kcal
▢8 ounces (227 g) sonkorta granulated
▢3 Miisaska cuntada lagu kariyo (27 g) sorbitol
▢8 ounces (227 g) Sharoobada galleyda gulukoos, malab ama sharoobada dahabka ah ayaa la hoos gelin karaa
▢6 ounces (170 g) biyo qabow cabitaanka miraha, khamriga ama vodka waa la sujuudi karaa
▢44 garaam (44 garaam) KNOX gelatin ilaa 6 baakado
▢laba qaaddo aashitada iskaga tag hadaad khamri isticmaalayso
▢1 1/2 qaaddo shaaha nacnac dhadhan Waxaan isticmaali jiray miraha loo yaqaan 'raspberry', 'strawberry' iyo feeraha kulaylaha
▢Wasakhda Goarumka Bear
Isku dar gelatin, iyo biyo (ama dareeraha dhadhanka leh) ee weelka kululaynta. Si tartiib ah walaaq si aad isugu darto. Ha fadhiisan 5 daqiiqo si aad u siiso gelatin waqti aad ubax.
Isku dar sharoobada galleyda, sonkorta, iyo sorbitol digsi dhexdhexaad ah. Si tartiib ah walaaq si aad isugu darto. Ku kari isku kari kuleylka dhexdhexaadka ah.
Markaad liqdo, ku dhaq dhinacyada dhinacyadeeda digsiga biyo adoo isticmaalaya burush duban oo nadiif ah si aad u hubiso in miraha sonkorta ah ee baadi ah ay si buuxda u milmaan.
Isku dar iskudarka dabka kuna walaaq citric acid iyo gelatin isku dar ah spatula ilaa gelatin la dhalaaliyo.
U oggolow in isku-darka uu fadhiisto 10 daqiiqo oo u oggolow isku-darka inuu nadiifiyo oo uu xumbo ka soo ururiyo xagga sare. 10 daqiiqo ka dib xumbadu waa inay awood u yeelataa in si fudud looga qaado dusha sare oo qaaddo ah.
Qaybi isku darkaaga adoo dareeraha ku kala siinaya seddex fijaan oo ku dar wax kasta oo midabeyn ama dhadhan nacnac ah oo aad rabto. Waxaan adeegsaday midabaynta casaan, buluug iyo jaalle.
Ku shub caaryadaada si khafiif ah saliid xoog leh oo tirtir xad-dhaafka. Ku darso isku darkaaga wasakhdaada.
U oggolow digaaga cirridkaaga in ay ku qaboojiso qaboojiyaha muddo 6 saacadood ah illaa iyo inta bearsadu dejinayaan laakiin 24 saac ayaa ugu fiican. Marka la dejiyo waxaa lagu keydin karaa heerkulka qolka.
U adeegida:labaatandigaag xanjo|Kalori:60kcal(3%)|Kaarboohaydraytyada:12g(4%)|Dufan:1g(laba%)|Sodium:1mg|Sonkor:12g(13%)|Kaalshiyam:1mg
sida loo sameeyo ukun baraf cad
ciyaaryahankii ugu weynaa ee abid abid
5 cuntooyinka keegga xiddigta ee xoqan
sida loo keydiyo keega dhaldhalaalka muraayada
sidee kuugu soo jiiday bullaacadaha